Ahoana no hikarakarana bitro mamy?
Miangavy hanome baolina kely ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany ve ny zanakao? Miantso ny kiraro tianao indrindra ve ianao ary maniry hanao fanomezana ho azy? Eritrereto! Ny biby dia tsy kilalao, tsy azo averina any amin'ny fivarotana izy, toy ny fehiloha tsy mifanaraka amin'ny haben'ny habeny, tsy afaka mahavonjy eny an-dalambe. Na izany aza, raha vita ny fanapahan-kevitra, na noho ny nahatonga anao ho sangisangy mahafatifaty ho toy ny fanomezana ho an'ny Taombaovao na ho an'ny Andro nahaterahana, ny fanontaniana dia tsy azo ihodivirana: ahoana no fomba hikarakarana tsara ny bitro?
Voalohany indrindra, eritrereto ny tena ilaina: ny tranom-bitsika, ny fomba fanadiovana ity sela ity na ny tsimokaretina manokana (ny bitro koa dia miatrika ny filàna samihafa, tsy maintsy raisina izany), sakafo sy vola ho an'ny fahasalaman'ny biby fiompy. Fa momba ny zavatra rehetra araka ny filaharany.
Inona no ataon'ny mihinanana?
Ny fampiharana dia mampiseho fa ny fanontaniana voalohany nangatahan'ny olona te hividy biby na handray azy ho toy ny fanomezana noho ny sakafo. Ahoana no ahafahan'ireo bitro ao an-trano, fantatry ny maro - mazava ho azy, ahitra sy ravina, legioma ary voankazo. Saingy ahoana no hikarakarana bitro mamy? Ny fihinanan'izy ireo dia tsy mitovy amin'ny fombam-panambadiana, izay atolotra "ho an'ny hena"? Ary eny, ary tsia. Ny bitro dia mitoetra ho bitro, ary ny fototra ny sakafony dia ny sakafo anana. Na dia izany aza, ny fanontaniana dia tonga avy hatrany: aiza no haka ny ahitra ho an'ny biby fiompinao, ary karazana ahi-maitso inona no mety hiterahan'ny bitro, ary iza no tsy mety? Any amin'ny tanàn-dehibe, dia tsy misy zavamaniry be dia be omena na bitry kely fotsiny aza, ankoatra izay, ny ahitra sy ny ravinà hazo any amin'ny faritra metropolitanina dia afangaro amin'ny metaly mavesatra sy poizina, tsy ho an'ny vavony malemy avy amin'ny bitro fàdana, fa ho an'ny zavamananaina tsirairay. Raha kely dia kely ny fifamoivoizana, ny ahitra, amin'ny fijerena voalohany, dia azo antoka ho an'ny biby fiompy. Na izany aza, tsy izany no izy. Ao Rosia, dia mitombo ny zavamaniry maro, poizina ho an'ny bitro, ohatra, quinoa. Raha tsy fantatrao hoe karazana zavamaniry inona no nianjera tamin'ny sakafo mahavelona, ​​dia aza misalasala. Ankoatra izany, tsy azonao omena ny ahi-bozaka, raha maraina be eo amin'ny ando no alaina alohan'ny hamokaran'ny biby. Ary amin'ny ankapobeny dia aza rovitra ny bozaka eny an-dàlana avy any amin'ny birao foibe, tsy hahasoa ny vatan'ny biby haingon-trano. Aza misalasala mankany amin'ny mpivarotra biby ary mangataha sakafo ho an'ny bitro. Amin'ny ankapobeny, dia fitahirizan-tsakafo, ahi-maitso, legioma sy voankazo, vitamina ary mineraly. Ny fonosana dia manondro ny habetsaky ny sakafo ilaina amin'ny biby mandritra ny andro (miankina amin'ny halatra sy ny lanjan'ny bitro).
Nihinana, afaka ary ...
Izay mihinana dia tsy afaka manampy amin'ny fanetre-tena, ary ny kamboty, ny fahalalana, ny fofona, ary ny tsy fanaovana firaisana. Ahoana no hikarakaranao ny bitro ao an-trano mba tsy hahatonga fofona tsy mahafinaritra ilay trano? Mianara fitsipika tsotra vitsivitsy, ary tsara daholo ny zava-drehetra. Voalohany: tokony ho lafo ny sela - ny halavan'io biby io dia ahafahanao manitsy ny isa kely indrindra: mitovy ny halavan'ny bitro, ny halavan'ny sela dia mitovy amin'ny halavan'ny bitro roa. Faharoa: ny sela dia tsy maintsy manana fanaka azo alaina mora azo. Ny fanafody dia feno ranom-boasary (araky ny fitsipika, kitay vita amin'ny hazo), tsy maintsy ovaina izy farafahakeliny indray mandeha isan-kerinandro ary hosasana amin'ny rano mafana. Fahatelo: Mila mikarakara ny bitro: diovina matetika ny tanany, ary mitondra azy ireo ny filler.
Aoka ho salama!
Mazava ho azy, fa maro amin'ireo tia an'ireny biby mahavariana ireny no liana amin'ny fomba hikarakarana bitro kely. Raha ny bitro Salama tsara, tsy manana aretina azo avy amin'ny firaisana izy, tsy sarotra. Ny sakafo voalanjalanja, ny fanadiovana tsy tapaka ny kalita, ny fifandraisana amin'ny biby ary ny fitiavana kely - izany no ilain'ny zaza rehetra. Na izany aza, mila bitika sy fikarakarana ny bitinina. Tadidio ireto fitsipika 3 ireto:
Ilaina ny mandinika fa ny hoby dia tsy mitsaha-mitombo hatrany - mihombo ny nifin'ny nify, tsy maintsy esorina izy ireo, raha tsy izany dia hijaly ny bitro;
tandremo tsara ny biby, dia tsy haninona izany, ary ny fijery dia hampifaly anao sy ny olon-tianao;
Mila mampiseho matetika ny bitro ho an'ny mpitsabo biby ianao: toy ny biby hafa, ny bitro dia mila vakina, fanadinana, indraindray azonao atao ny manadio ny sofina na manasitrana azy ireo amin'ny parasy.
Ireo alika malaza indrindra
Sakafo ho an'ny alika Dadabe
Ahoana ny fomba hanadiovana ny aquarium?
Ny anaran'ny alikan'ny zazalahy
Tracker ho an'ireo alika - fitsipika mifidy GPS
Dirofilariasis amin'ny alika
Parrot Cockatoos - Karazana fiahiana sy fikojakojana
Sakafo ho an'ny alika purin
Fiantohana fiarovana amin'ny atidoha eo amin'ny ankizy
Dresses amin'ny akanjo lava
Kisoa amin'ny tanany
Nolavin'ny mpitsara Joda Lowe ny tsaho hoe ho lasa ray ho an'ny fahenina ny mpilalao
Fonosana fanaka ao anatiny
Tao amin'ny efitra fandraisam-bahinin'ny efitra fandroana
Fotsy mainty sy fotsy ho an'ny rindrina
Salady misy salmonosy sy voatabia
Divay voaloto homemade
Ny ratra amin'ny lohalika - fanampiana voalohany, fomba amam-pahaizana ary fomban'ny fitsaboana
Amin'ny inona ny akanjo hosodoko amin'ny fanontana?
Nahoana ianao no manonofy rano?
Ny akanjo hariva amin'ny fomba grika
Ahoana no ahafahako manavao ny lakozia amin'ny tenako?
Biby fotsy maro no famantarana
Ahoana no hiainana raha tsy misy fitiavana?